Torkestàna - Wikipedia
I Torkmenistàna tamin'ny taonjato faha-4 hatramin'ny faha-6
I Torkestàna dia faritra tao Azia Afovoany izay hita eo anelanelan'ny Ranomasina Kaspiana ao andrefana sy ny tany efitr'i Gobi ao atsinanana. Voazara roa i Torkestàna ka ao i Torkestàna Andrefana (mifanandrify amin'i Torkestàna rosiana taloha, izay mahafaoka ny tapany atsimon'i Kazakstàna, i Kirgizistàna, i Ozbekistàna, ary i Torkmenistàna) sy i Torkestàna Atsinanana (mifanandrify amin'i Torkestàna sinoa taloha). Nisy koa ny Torkestàna afgana. Amin'ny fiteny torka dia atao hoe Türkistan (izay midika hoe "Tanin'ny Torka") io faritra io.
Niantsoana ny faritra iray ao Azia Afovoany ny hoe Torkestàna tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19 tamin'ny nahatraran'ireo empira tandrefana ny fara tampon'ny tanjany, izany faritra izany dia faritan'ny stepan'i Kazakstàna sy ny tangorom-bohitra Altay ao avaratra, i Môngôlia sy i Sina ao atsinanana, i India sy i Pakistàna sy i Afganistàna ary i Iràna ao atsimo, ary ny Ranomasina Kaspiana ao andrefana.
Avy amin'ny nisehoan'ireo sivilizasiona torka voalohandohany sy ny fandaminana sy fikambanana nisy tamin'izany tao amin'io farirta io no niavian'ny anarana hoe Torkestàna. Ny Empira persiana aloha no nanapaka izany faritra izany hatramin'ny taonjato faha-2 tal. J.K. tamin'ny nanjakan'i Histapesy (rain'i Dariosy I) na i Dariosy I tenany, avy eo tamin'ny fifindrà-monina torka sy ny fiitaran'izany faritra izany dia nahatratra ny fara tampony tamin'ny taonjato faha-4 hatramin'ny faha-6 tamin'ny andron'ny Empira heftalita izay nampaharetin'ny Hona fotsy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Torkestàna&oldid=980052"
Voaova farany tamin'ny 24 Janoary 2020 amin'ny 09:36 ity pejy ity.